Warkii.com-News and information about Somalia AKHRISO: Musharaxiintii ugu badnaa oo Go’aan Culus ka soo saaray Muqdisho - Warkii.com-News and information about Somalia
AKHRISO: Musharaxiintii ugu badnaa oo Go’aan Culus ka soo saaray Muqdisho
1. Musharaxiintu waxay ku heshiiyeen inay ku midoobaan curinta golahaan si ay xiriir talo wadaag ah u yeeshaan.
2. Musharaxiintu waxay ku heshiiyeen ujeeddada golaha oo ah in abaabul mideysan iyo aragti mid ah laga yeesho ka hortagga faragelinta qaldan ee lagu hayo doorashooyinka.
3. Musharaxiintu waxay ku heshiiyeen inay u midoobaan in Soomaaliya uu ka dhasho isbeddel siyaasadeed oo horseeda helitaanka hoggaan cusub oo dalka ka saari kara xaaladda adag ee uu ku jiro.
4. Musharaxiintu waxay ka digayaan wax kasta oo keeni kara musuqmaasuq siyaasadeed oo halis gelin kara inaan la aqoonsan natiijada doorashooyinka.
5. Musharaxiintu waxay xusuusinayaan dawladaha daneeya arrimaha Soomaaliya inay ka fogaadaan wax kasta oo shaki gelin kara dhexdhexaadnimadooda iyo wax kasta oo muujin kara inay musharaxiin gaar ah taageerayaan.
6. Musharaxiintu waxay ugu baaqayaan madaxda dawladda uu waqtigeedu dhamaaday inay joojiso adeegsiga awoodda iyo hantida qaranka in loo isticmaalo ololaha doorashooyinka.
7. Musharaxiintu waxay xusuusinayaan hawlwadeennada dawladda iyo hay’adaha amniga inay waajib ku tahay inay dhexdhexaad ka noqdaan loollanka siyaasadda.
8. Musharaxiintu waxay dalbanayaan in doorashada Madaxweynaha ay ka dhacdo goob amaankeedu uu sugan yahay, habraaca doorashooyinkuna uu daahfuran yahay, musharaxiintuna u siman yihiin.
9. In warbaahinta Qaranka eey uwada sinaadaan Murashaxiinta oo dhan.
10. Goluhu wuxuu u xilsaaray Ra’iisal wasaare kuxigeenkii hore Md. Riwaan Xirsi Maxamed & Md. Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil isku duwida iyo maareeynta arrimaha golaha.